indlela yokukhuphela iifayile ngokukhawuleza kwi-samsung galaxy s5
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ungazikhuphela njani iifayile ngokukhawuleza kwi-Samsung Galaxy S5
Ungazikhuphela njani iifayile ngokukhawuleza kwi-Samsung Galaxy S5
Ngaba uyazi ukuba unokukhuphela iifayile ngokukhawuleza kwi-Galaxy S5? Iflegi entsha ye-Android ye-Samsung iza neyakhelweyo‘Khuphela isiXhasi’imowudi ekuvumela ukuba usebenzise isantya se-Wi-Fi kunye neenethiwekhi ze-4G LTE ezidityanisiweyo. Oku kuya kuza ngokufanelekileyo, ngakumbi kubasebenzisi abangxamele ukukhuphela ifayile enkulu.
Ukwenza ukuba isebenze‘Khuphela isiXhasi’ilula njengoko ifika- kufuneka uyazi nje ukuba ukhetho lukhona. Uninzi lweGalaxy S5, ukwenzela ukukhuphela i-booster, kufuneka uqale wenze i-Mobile Data kunye ne-Wi-Fi, kwaye udibanise phezulu ukusuka phezulu uze nomthunzi wesaziso. Slayida ii-toggles ngasekhohlo, kwaye-ngokungagqibekanga-kulapho iifayile ze-‘Khuphela isiXhasi’imowudi ihlala.
Ukuba awuyifumani apho, qiniseka ukuphinda ujonge: vula iisetingi ezivulekileyo kwaye ujonge i icon yokuKhuphela. Ngokuzenzekelayo, luphawu oluhlaza okwesibhakabhaka oluvela kwelona qondo liphezulu, kwaye unako ukuyenza ilapho nayo.
Ezinye izixhobo zeGalaxy S5, nangona kunjalo, zinokuswela le ndlela intsha. Ngapha koko, ezona ziphathamandla zintathu ze-US-iVerizon Wireless, i-AT & T, i-Sprint- kuthethathethwano malunga nokususwa kwenqaku ukunqanda ukuba iinethiwekhi zabo zixakeke. Oyena mphathi mkhulu waseMelika obonakala ngathi uyayixhasa okwangoku yiT-Mobile.
Okokugqibela, gcinani engqondweni ukuba ngokusebenzisa uqhagamshelo lwakho lwe-4G LTE ukukhuphela iifayile ezinkulu, uya kusiphelisa ngokukhawuleza isibonelelo sakho sedatha senyanga. Ngapha koko, unokubaleka kwimirhumo engaphezulu kwezinye zezithuthi. Inkqubo ye-‘Khuphela isiXhasi’inokuba yinto ebalulekileyo kula maxesha xa ufuna ukufumana iifayile ngokukhawuleza, kodwa qiniseka ukuyisebenzisa ngononophelo.
I-Samsung galaxy ivela kwiintengiso
I-Verizon inelayini ye-Samsung Galaxy S20 5G xa ithengiswa ukuya kuthi ga kwizaphulelo ze- $ 850
Isicwangciso esitsha se-Flex yeTing mobile-gcina iitoni ngezicwangciso zedatha ekwabelwana ngayo!
Ungabhloka njani iinombolo zefowuni kwi-iOS, i-Android, kunye neFowuni yeWindows